Kubva pane nheyo dze art art - Afrikhepri Fondation
Zirignon Grobli kuita unyanzvi hwehutano
Kubva pane hwaro hwekurapa kwehunyanzvi
ANekuda kwechiitiko chekuti nyika ino inzvimbo yekutambudzika, munhu agara achifungidzira nezve dzidziso dzekununura muzvitendero nemumagariro. Nhasi, mushure mekurwadziwa kwevabereki vechiMarxism, icho chinoshoropodzwa nekuda kwekusabudirira muchirongwa chayo chevanhu (nekutenda kuti kutyisa kunoitwa ne "hudzvanyiriri hwevabati" kunoshandura varume nekuvabvisa kamwechete uye zvachose zvido zvavo. capitalists kukuunganidza hupfumi uye psychoanalysis (ndiani asingagoni kuregererwa kwenguva yekurapwa kwake uye kupora kwake kwakasarudzika) .Asi, zvingave here zvimwe kune hunyanzvi hunovimba nababa vekunyepedzera kuti vataure hurukuro dzavo nenzira yekunyepedzera yekunyepera?
Akatorerwa chishandiso chakakodzera kuburitsa murwere kubva munzvimbo yekufungidzira umo amai vane simba rese vanomuvharira, psychoanalyst uyo anotaura nezve "yekufananidzira castration", muhurukuro isina chinhu, aisakwanisa kuzadzisa chinangwa chake: kupora kwakazara. Nekuti, iko kusikwa kwemafomu epamberi uye kurongeka kunobva mukufananidzira kukandwa kunounza iko kupora.
"Kurapa kwehunyanzvi" ndiyo tariro yeruponeso iyo inomiririra zviroto zvevanhu vakavhiringidzika panguva ino yedambudziko rakadzika izvo "vanofunga" vasingazeze kuona semagumo ebudiriro yevaJudao-nevaKristu.
Kuve mumwe weavo, pamwe neveSaint-Anne de Paris timu, vakatarisisa zviri pamutemo iyi nyowani kurapwa pa "kubhabhatidza font" (pamusangano wekutanga muDakar muna 1998) uye ndiani kusvika parizvino vakanyora angangoita mabhuku makumi maviri nezvenyaya iyi, isu tenda isu tinofanirwa kushamisika nezveramangwana rerutsigiro urwu rwuri kutsamwa kwese munzvimbo dzese dzepasi, kusvika pakuti, muFrance, zvimwe zvikoro zvedzidzo, kudzidziswa uye kutsigirwa muhunyanzvi zvakagamuchira mvumo yenyika.
Hunhu hwave hwakawanzo kuve nyajambwa wetariro yenhema uye isu tinotenda kuti isu tine basa rekuzvidzivirira kubva mukuwedzera kushungurudzika. Ichi ndicho chikonzero, isu takashinga pasina kurerekera kunzvimbo dzisingazivikanwe dzerapi art, neku "bata" mufananidzo chete waamai vekufananidzira (vakawanikwa panguva yekurapwa kwedu), tinotenda kuti tinogona kupupura kuti psychoanalysis ndiyo inodikanwa yezvehunyanzvi zviitiko muhunyanzvi hwekurapa. Ndezvechokwadi nekuzvitsigira kubva pahukama hwangu nepfungwa yedu yepfungwa (rugare kumweya wake) kuti ndakanzwa chishuwo chekuenda kunzvimbo dzisingazivikanwe dzeiyo preverbal system yekuwedzera munda weedu heuristic uye yekurapa kuferefeta.
Pakutanga kwekufarira kwedu kurapa kwehunyanzvi, saka pane chishuwo chekudzora chiratidzo chinopesana nekuongororwa (agoraphobia) nerubatsiro, isu takave neiyo intuition, yemhasuru chiitiko, nekutenda kuburikidza nekurevererwa kwerutsigiro rwehunyanzvi, sezvinoita mwana mune yake nharaunda apo, akatakurwa neimago yaamai vekufananidzira, anobva kure nemuviri wake kuratidza "kupatsanuka kunetseka".
Unyanzvi hwekurapa mhedzisiro yekufamba pane rutsigiro rwechiitiko chekutsvaga nemwana wemuviri weamai vekufananidzira. Zviratidzo zvezvinhu zvekufananidzira izvo zvinobva ku "kutaurirana" nerutsigiro zvinomiririra zvakaenzana zvezvinowoneka kana zvishoma "zvinoverengeka" zvinotsvakirwa nezvinoongororwa nemwana munharaunda.
Sechigadzirwa chekushandurwa kweizvi mumunda wedimikira (weanofungidzira kutsiva muviri wamai), hunyanzvi hwekurapa hunovhura nzira yechiitiko chekusika chekufananidzira kana mafomu epamberi: "zvikamu" zvechimiro chemitauro yakaraira ine mhedzisiro yekudzima iyo "yekunyepera", apa agoraphobia yakanyangarika nekuda kwekugona kwechifananidzo cheedu anal-sadistic dhiraivhu parutsigiro, inofananidzirwa nedombo ratakabhabhatidza "Guardian yenzvimbo". Isu takafunga kuti agoraphobia yedu yaive mhedzisiro yehukama hwedu husina kusarudzika munharaunda.
Iyi nzira inotibvumira kutaura kuti art yekurapa ndiyo nzira yehumambo yeku "Refoundation" munharaunda yakaparadzaniswa iyi mutauro, chimiro chemunhu, chakarasikirwa nebasa rayo rekutaura kudzikiswa kuita chinzvimbo che chimbo chekunakidzwa uye kutonga.
Psychoanalyst, muvepi uye muongorori wehutano
Iye mumongi akatengesa Ferrari yake - Robin Sharma (Audio)
Ginseng inovandudza unyanzvi hwepanyama nehunyanzvi
Mission, Zadzisa Zvaunokoshesa Zvinangwa - Stephen Covey (Audio)